သင် မှန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒါတွေ သိထားမိဖူးရဲ့လား..? – Myanmar Breaking News
Homepage / Horror / သင် မှန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒါတွေ သိထားမိဖူးရဲ့လား..?
ကိုယ်တို့တွေထဲမှာတစ်နေ့နေလို့မှ မှန်တစ်ခါမကြည့်တဲ့သူတော့ပါဟန်မတူပါဘူးနော်။အပြင်ထွက်မယ်ဆိုမှန်ရှေ့ရပ်ပြီးနည်းနည်းတော့ရွှိုင်းလိုက်ရမှဆိုတဲ့သူတွေများသကိုး။ အချို့ဆို အိမ်ကမှန်တင်အားမရလို့ ကားပေါ်က နောက်ကြည့်မှန်ရော၊ဖြတ်သွားဖြတ်လာကားတွေရဲ့ပြတင်းပေါက်မှန်တွေရော အလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးရယ်။
အဲ… ဒါပေမယ့်ကိုယ်တို့တွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြည့်ဖြစ်နေတဲ့မှန်တွေထဲကနေ ကိုယ်တို့ရဲ့ဟန်အမူအရာမှန်သမျှကိုလှောင်ပြောင်နေနိုင်တဲ့မမြင်ရတဲ့သတ္တဝါတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ တစ်ခါဖူးမျှမတွေးမိကြဘူးဟုတ်။ ဘယ်မှာတွေးမိကြပါ့မလဲလေ၊မှန်ဆိုတာကြည့်ဖို့ပဲ၊လှလားကြည့်မယ်၊သွားမှာငရုတ်သီးတွေကပ်နေလား၊မိတ်ကပ်တွေကွက်နေပလား၊နှုတ်ခမ်းနီနဲ့အဝတ်အစားနဲ့ကအရောင်လိုက်ရဲ့လား၊ယောက်ကျားလေးတွေဆိုလည်း တက်တူးတွေလှရဲ့လား၊မုတ်ဆိတ်မွှေးနှုတ်ခမ်းမွှေးတွေရှည်နေပလားကြည့်မယ်၊ပြီးရင်အေးအေးဆေးဆေးလေလေးချွန်ပြီး အပြင်ထွက်သွားမယ်။ ဒါပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အချို့မှန်တွေကတော့ အဲ့လောက်မရိုးရှင်းပါဘူး။မှန်တွေကပြောတဲ့ သူတို့နဲ့ပက်သက်တဲ့သတ္တဝါတွေအကြောင်းနည်းနည်းလောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
ထိပ်ဆုံးက မှန်မယ်တော်ကတော့ Mary ပါပဲ။ သူ့အကြောင်းတော့အကုန်လုံးကသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ(Supernatural Fans တွေက တော့ Mary ကို Sam နဲ့ Dean က သတ်လိုက်လို့ မရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြမယ်ပေါ့)ဒါပေမယ့်လူတော်တော်များများကတော့ ယုံနေကြဆဲ၊ကလေးတွေကြားမှာလဲ စွန့်စားရတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲပါပဲ။Mary ကိုဆင့်ခေါ်ဖို့အတွက် ညသန်းခေါင်ယံအချိန် အမှောင်ချထားတဲ့အခန်းတခန်းထဲမှာတစ်ယောက်တည်းမှန်ရှေ့ရပ်နေရမယ်၊ Bloody Mary လို့ သုံးခါတိတိအော်ရမယ် (တချို့က ငါးခါအော်မှလာတယ်ပြောတယ်၊Maryလည်းအသက်ကြီးပြီိဆိုတော့နားလေးနေပြီနေမပေါ့) အော်ပြီးတာနဲ့ Mary က သင့်နောက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်(အချို့ကတော့ မှန်ထဲကထွက်လာမယ်တဲ့ ၊ သူလာချင်သလိုလာမယ်ထင်ပါ့) အဲ့ခါကျ ဖနောင့်နဲတင်ပါးတစ်သားတည်းကျအောင်အနောက်က ရည်းစားဟောင်းလိုက်လာတယ်လို့သဘောထားပြီးပြေးပေတော့။မိသွားတဲ့သူတွေကလည်းအသက်ရှင်မကျန်ရစ်တော့မိသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ( သိချင်ရင်တစ်ခါလောက်အမိခံကြည့်ပါလား)။
ဒါက သိပ်တော့ ကြားဖူးကြမယ်မထင်ဘူး (ဒီတစ်ကောင်ကိုလည်း Sam နဲ့ Dean ကသတ်ပြီးသွားပြီသိလား၊ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဆင်တူရိုးမှားသရဲတွေလည်းရှိသေးဆိုပဲ၊လူတောင်မှလူတူမရှား နာမည်တူမရှားဆိုမဟုတ်လား) Blue Baby ရဲ့ ခြောက်ပုံခြောက်နည်းကတော့Bloody Mary လိုပါပဲ။ ညနက်သန်းခေါင်မှာ လူတစ်ယောက်မှမရှိတဲ့အိမ်ရဲ့ မှောင်မည်းအေးစိမ့်နေတဲ့အခန်းထဲကမှန်ရှေ့ရပ်ပြီး မွေးကင်းစကလေးလေးကို ချီထားတဲ့ပုံလုပ်ရင် Blue Baby လို့ ဆယ့်သုံးခါအော်ရပါမယ်တဲ့။အော်ပုံအော်နည်းမှန်ခဲ့ရင် သင့်လက်က လေးလာပြီး ကလေးလေးရဲ့ ရယ်သံသဲ့သဲ့ကိုကြားရမယ်၊ဒါမှမဟုတ်လူးလွန့်ကုတ်ခြစ်မှုတွေကိုခံစားရမယ်တဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကလေးကိုလွှတ်ချပြီးပြေးရပါမယ်၊မနက်ရောင်နီမလာမခြင်းအဲဒီ့အခန်းထဲကိုပြန်မဝင်ရပါဘူး၊မနက်လင်းလို့ဝင်ရင်တောင်မှတစ်ယောက်တည်းမဝင်ရပါဘူး။အခန်းတံခါးတွေကိုဖွင့်ပြီး နေရောင်ကောင်းကောင်းရအောင် လင်းကျင်းနေအောင်လုပ်ထားရပါမယ်တဲ့။တကယ်လို့မပြေးမိရင်တော့ မှန်ထဲမှာ ကလေးရဲ့အမေ သရဲမကပေါ်လာပြီး ငါ့ကလေးပြန်ပေးလို့အသံနက်ကြီးနဲ့အော်ရင်းသင့်ကိုဇီဝိန်ခြွေပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြေးနိုင်လို့လွတ်ခဲ့ရင်တောင် သင့်အိမ်ကအခြားလိပ်ပြာငယ်တဲ့သူတွေ၊ခွေးတွေကလေးတွေကိုဝိညာဉ်ထုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကြည့်တဲ့မျက်နှာပြင်ကအနက်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့မှန်တွေပါ။ စုန်းတွေမှော်ပညာရှင်တွေတော်တော်များများရဲ့လက်စွဲပစ္စည်းတွေဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့။ သူတို့ကအဲ့ဒါက်ိုအသုံးချပြီးအတိတ်၊အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုကြည့်ကြတယ်ဆိုပဲ။ မှန်နက်တွေဟာ အရေးပါတဲ့ ဂမ္ဘီရပစ္စည်းတွေဖြစ်သလိုအဲဒါကိုအသုံးပြုတဲ့လူရဲ့မသိစိတ်နဲ့ သိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ လက်ခံထားကြပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။မှန်နက်တွေဟာ ဒီိကမ္ဘာနဲ့အခြားကမ္ဘာတွေက သက်ရှိတွေကိုဆက်သွယ်ပေးတယ်လို့လည်းအယူရှိကြပါတယ်။(NASAက သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်း မှန်နက်တစ်ယောက်တစ်ခုလောက်ဆောင်ထားသင့်တယ်နော်၊သူငယ်ချင်းရေမင့်တို့ဂြိုလ်ဘယ်လိုနေလဲ ငါတို့ဂြိုလ်မှာ ပါတီလုပ်မလို့လာခဲ့ဦးလေတို့ဘာတို့ ပြောလုိ့ရတာပေ့ါဂြိုလ်သားတွေကို )
များပြားလှစွာသော ပရလောကသားတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေမှာပါတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကြည့်မှန်နှစ်ချပ်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ထောင်ထားပေးရင် ဝိညာဉ်တွေအချင်းချင်းကူးလူးဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တံခါးဝတစ်ခုဖွင့်ပေးထားသလိုပါပဲတဲ့။ ဂရုတော့စိုက်ပေါ့နော် အချို့ဝိညာဉ်တွေကမှန်တစ်ခုထဲကနေ အခြားမှန်တစ်ခုထဲကို ပလိန်းကြီးကူးချင်မှကူးမှာ သင့်အခန်းထဲမှာတစ်ထောက်နားရင်နားနေမှာ။
နောက်ပြီး ညဘက်မှာ မီးထွန်းထားတဲ့ဖယောင်းတိုင်ကိုကိုင်ပြီးမှန်တစ်ချပ်ထဲကိုစိုက်ကြည့်နေရင် တကယ်လုိ့ သင့်အိမ်မှာ ဝိညာဉ်တွေ တစ္ဆေသရဲတွေရှိနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီ့သတ္တဝါက သင့်ဘေးမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မြင်ရရင်တောင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေပါ၊သင်သူ့ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိမှန်းသိသွားရင်ဘာလုပ်လုပ်သင့်ဘေးမှာပဲလိုက်ကပ်နေပါလိမ့်မယ်တဲ့။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သင်အိပ်နေတဲ့အနီးအနားမှာ ကြည့်မှန်ကိုမထားသင့်ပါဘူး၊ထားရင်တောင်ညဘက်မှာတစ်ခုခုနဲ့ဖုံးကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ဂရိကျမ်းစာတွေအရ လူတွေအိပ်နေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကလွင့်ပါးပျောက်ကွယ်ပြီးကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပဲကိန်းအောင်းလာတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် မှန်တစ်ခုခုသင်အိပ်နေတဲ့နားမှာရှိနေရင်တော့ မှန်တွေရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်တတ်တဲ့သဘောအရ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေက မှန်ထဲကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲဝေ့ဝဲနေတော့မှာမို့ အိပ်စက်ခြင်းကိုအလကားဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။
(ဒါ သက်သက်ဆိုက်ကိုသွင်းတာ 😛 )
ကိုယျတို့တှထေဲမှာတဈနနေ့လေို့မှ မှနျတဈခါမကွညျ့တဲ့သူတော့ပါဟနျမတူပါဘူးနျော။အပွငျထှကျမယျဆိုမှနျရှရေ့ပျပွီးနညျးနညျးတော့ရှိုငျးလိုကျရမှဆိုတဲ့သူတှမြေားသကိုး။ အခြို့ဆို အိမျကမှနျတငျအားမရလို့ ကားပျေါက နောကျကွညျ့မှနျရော၊ဖွတျသှားဖွတျလာကားတှရေဲ့ပွတငျးပေါကျမှနျတှရေော အလှတျပေးတာမဟုတျဘူးရယျ။
အဲ… ဒါပမေယျ့ကိုယျတို့တှေ နစေ့ဉျနဲ့အမြှကွညျ့ဖွဈနတေဲ့မှနျတှထေဲကနေ ကိုယျတို့ရဲ့ဟနျအမူအရာမှနျသမြှကိုလှောငျပွောငျနနေိုငျတဲ့မမွငျရတဲ့သတ်တဝါတှရှေိနနေိုငျတယျလို့ တဈခါဖူးမြှမတှေးမိကွဘူးဟုတျ။ ဘယျမှာတှေးမိကွပါ့မလဲလေ၊မှနျဆိုတာကွညျ့ဖို့ပဲ၊လှလားကွညျ့မယျ၊သှားမှာငရုတျသီးတှကေပျနလေား၊မိတျကပျတှကှေကျနပေလား၊နှုတျခမျးနီနဲ့အဝတျအစားနဲ့ကအရောငျလိုကျရဲ့လား၊ယောကျကြားလေးတှဆေိုလညျး တကျတူးတှလှေရဲ့လား၊မုတျဆိတျမှေးနှုတျခမျးမှေးတှရှေညျနပေလားကွညျ့မယျ၊ပွီးရငျအေးအေးဆေးဆေးလလေေးခြှနျပွီး အပွငျထှကျသှားမယျ။ ဒါပဲပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခြို့မှနျတှကေတော့ အဲ့လောကျမရိုးရှငျးပါဘူး။မှနျတှကေပွောတဲ့ သူတို့နဲ့ပကျသကျတဲ့သတ်တဝါတှအေကွောငျးနညျးနညျးလောကျနားထောငျကွညျ့လျိုကျရအောငျ…
ထိပျဆုံးက မှနျမယျတျောကတော့ Mary ပါပဲ။ သူ့အကွောငျးတော့အကုနျလုံးကသိပွီးသားဖွဈမှာပါ(Supernatural Fans တှကေ တော့ Mary ကို Sam နဲ့ Dean က သတျလိုကျလို့ မရှိတော့ပါဘူးလို့ပွောကွမယျပေါ့)ဒါပမေယျ့လူတျောတျောမြားမြားကတော့ ယုံနကွေဆဲ၊ကလေးတှကွေားမှာလဲ စှနျ့စားရတဲ့ကစားနညျးတဈခုအဖွဈရပျတညျနဆေဲပါပဲ။Mary ကိုဆငျ့ချေါဖို့အတှကျ ညသနျးခေါငျယံအခြိနျ အမှောငျခထြားတဲ့အခနျးတခနျးထဲမှာတဈယောကျတညျးမှနျရှရေ့ပျနရေမယျ၊ Bloody Mary လို့ သုံးခါတိတိအျောရမယျ (တခြို့က ငါးခါအျောမှလာတယျပွောတယျ၊Maryလညျးအသကျကွီးပွီိဆိုတော့နားလေးနပွေီနမေပေါ့) အျောပွီးတာနဲ့ Mary က သငျ့နောကျမှာပျေါလာပါလိမျ့မယျ(အခြို့ကတော့ မှနျထဲကထှကျလာမယျတဲ့ ၊ သူလာခငျြသလိုလာမယျထငျပါ့) အဲ့ခါကြ ဖနောငျ့နဲတငျပါးတဈသားတညျးကအြောငျအနောကျက ရညျးစားဟောငျးလိုကျလာတယျလို့သဘောထားပွီးပွေးပတေော့။မိသှားတဲ့သူတှကေလညျးအသကျရှငျမကနျြရဈတော့မိသှားရငျဘာဖွဈမလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ( သိခငျြရငျတဈခါလောကျအမိခံကွညျ့ပါလား)။
ဒါက သိပျတော့ ကွားဖူးကွမယျမထငျဘူး (ဒီတဈကောငျကိုလညျး Sam နဲ့ Dean ကသတျပွီးသှားပွီသိလား၊ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘာအရပျရပျမှာ ဆငျတူရိုးမှားသရဲတှလေညျးရှိသေးဆိုပဲ၊လူတောငျမှလူတူမရှား နာမညျတူမရှားဆိုမဟုတျလား) Blue Baby ရဲ့ ခွောကျပုံခွောကျနညျးကတော့Bloody Mary လိုပါပဲ။ ညနကျသနျးခေါငျမှာ လူတဈယောကျမှမရှိတဲ့အိမျရဲ့ မှောငျမညျးအေးစိမျ့နတေဲ့အခနျးထဲကမှနျရှရေ့ပျပွီး မှေးကငျးစကလေးလေးကို ခြီထားတဲ့ပုံလုပျရငျ Blue Baby လို့ ဆယျ့သုံးခါအျောရပါမယျတဲ့။အျောပုံအျောနညျးမှနျခဲ့ရငျ သငျ့လကျက လေးလာပွီး ကလေးလေးရဲ့ ရယျသံသဲ့သဲ့ကိုကွားရမယျ၊ဒါမှမဟုတျလူးလှနျ့ကုတျခွဈမှုတှကေိုခံစားရမယျတဲ့။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကလေးကိုလှတျခပြွီးပွေးရပါမယျ၊မနကျရောငျနီမလာမခွငျးအဲဒီ့အခနျးထဲကိုပွနျမဝငျရပါဘူး၊မနကျလငျးလို့ဝငျရငျတောငျမှတဈယောကျတညျးမဝငျရပါဘူး။အခနျးတံခါးတှကေိုဖှငျ့ပွီး နရေောငျကောငျးကောငျးရအောငျ လငျးကငျြးနအေောငျလုပျထားရပါမယျတဲ့။တကယျလို့မပွေးမိရငျတော့ မှနျထဲမှာ ကလေးရဲ့အမေ သရဲမကပျေါလာပွီး ငါ့ကလေးပွနျပေးလို့အသံနကျကွီးနဲ့အျောရငျးသငျ့ကိုဇီဝိနျခွှပေါလိမျ့မယျ။ သငျပွေးနိုငျလို့လှတျခဲ့ရငျတောငျ သငျ့အိမျကအခွားလိပျပွာငယျတဲ့သူတှေ၊ခှေးတှကေလေးတှကေိုဝိညာဉျထုတျသှားပါလိမျ့မယျ။
ကွညျ့တဲ့မကျြနှာပွငျကအနကျရောငျဖွဈနတေဲ့မှနျတှပေါ။ စုနျးတှမှေျောပညာရှငျတှတေျောတျောမြားမြားရဲ့လကျစှဲပစ်စညျးတှဆေိုလညျးမမှားဘူးပေါ့။ သူတို့ကအဲ့ဒါကျိုအသုံးခပြွီးအတိတျ၊အနာဂတျဖွဈရပျတှကေိုကွညျ့ကွတယျဆိုပဲ။ မှနျနကျတှဟော အရေးပါတဲ့ ဂမ်ဘီရပစ်စညျးတှဖွေဈသလိုအဲဒါကိုအသုံးပွုတဲ့လူရဲ့မသိစိတျနဲ့ သိစိတျကိုဆကျသှယျပေးတဲ့ပစ်စညျးတှလေို့ လကျခံထားကွပါတယျ။ဒါတငျမကသေးပါဘူး။မှနျနကျတှဟော ဒီိကမ်ဘာနဲ့အခွားကမ်ဘာတှကေ သကျရှိတှကေိုဆကျသှယျပေးတယျလို့လညျးအယူရှိကွပါတယျ။(NASAက သိပ်ပံပညာရှငျတှလေညျး မှနျနကျတဈယောကျတဈခုလောကျဆောငျထားသငျ့တယျနျော၊သူငယျခငျြးရမေငျ့တို့ဂွိုလျဘယျလိုနလေဲ ငါတို့ဂွိုလျမှာ ပါတီလုပျမလို့လာခဲ့ဦးလတေို့ဘာတို့ ပွောလို့ရတာပေ့ါဂွိုလျသားတှကေို )
မြားပွားလှစှာသော ပရလောကသားတှအေကွောငျးရေးထားတဲ့ စာအုပျစာတမျးတှမှောပါတဲ့နောကျတဈခကျြကတော့ကွညျ့မှနျနှဈခပျြကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျထောငျထားပေးရငျ ဝိညာဉျတှအေခငျြးခငျြးကူးလူးဆကျသှယျလို့ရတဲ့ဝိညာဉျတံခါးဝတဈခုဖှငျ့ပေးထားသလိုပါပဲတဲ့။ ဂရုတော့စိုကျပေါ့နျော အခြို့ဝိညာဉျတှကေမှနျတဈခုထဲကနေ အခွားမှနျတဈခုထဲကို ပလိနျးကွီးကူးခငျြမှကူးမှာ သငျ့အခနျးထဲမှာတဈထောကျနားရငျနားနမှော။
နောကျပွီး ညဘကျမှာ မီးထှနျးထားတဲ့ဖယောငျးတိုငျကိုကိုငျပွီးမှနျတဈခပျြထဲကိုစိုကျကွညျ့နရေငျ တကယျလို့ သငျ့အိမျမှာ ဝိညာဉျတှေ တစ်ဆသေရဲတှရှေိနခေဲ့ရငျအဲ့ဒီ့သတ်တဝါက သငျ့ဘေးမှာပျေါလာတတျပါတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ မွငျရရငျတောငျ မမွငျခငျြယောငျဆောငျနပေါ၊သငျသူ့ကိုမွငျနိုငျစှမျးရှိမှနျးသိသှားရငျဘာလုပျလုပျသငျ့ဘေးမှာပဲလိုကျကပျနပေါလိမျ့မယျတဲ့။
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ သငျအိပျနတေဲ့အနီးအနားမှာ ကွညျ့မှနျကိုမထားသငျ့ပါဘူး၊ထားရငျတောငျညဘကျမှာတဈခုခုနဲ့ဖုံးကှယျထားသငျ့ပါတယျ။ဂရိကမျြးစာတှအေရ လူတှအေိပျနခြေိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျထဲကမကောငျးတဲ့ဓာတျတှကေလှငျ့ပါးပြောကျကှယျပွီးကောငျးတဲ့ဓာတျတှပေဲကိနျးအောငျးလာတယျလို့အဆိုရှိပါတယျ။ဒါပမေယျ့ မှနျတဈခုခုသငျအိပျနတေဲ့နားမှာရှိနရေငျတော့ မှနျတှရေဲ့ရောငျပွနျဟပျတတျတဲ့သဘောအရ သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲက မကောငျးတဲ့ဓာတျတှကေ မှနျထဲကိုရောငျပွနျဟပျပွီးသငျ့ခန်ဓာကိုယျအနီးတဈဝိုကျမှာပဲဝဝေဲ့နတေော့မှာမို့ အိပျစကျခွငျးကိုအလကားဖွဈစပေါတယျတဲ့။
(ဒါ သကျသကျဆိုကျကိုသှငျးတာ 😛 )
Previous post KIA ရဲ့ လိုင်ဇာဌာနချုပ် တပ်​မ​တော်​ရဲ့သမိုင်းမှာ တိုက်​ပီးသိမ်းလို့မရဖူးတဲ့ ရန်​သူ့စခန်းဆိုတာ ဘယ်​တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး
Next post စောက်ဆင့်မရှိတဲ့ယောကျာ်း တို့ရဲ့ အချစ်